कम्पनी शो/कारखाना भ्रमण
आर एन्ड डी (अनुसन्धान र कारखाना यात्रा)
इन्जिनियरि C केस
अगाडि घुमाइएको केन्द्रापसारक फ्यान
पछाडि घुमाइएको केन्द्रापसारक फ्यान
ईन्जिनियरि Fan् प्रशंसक
बक्स प्रकार फ्यान
धुवाँ निकास फ्यान
महामारी विरोधी वस्तुहरु
हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्नुहोस्
छिटो प्रतिक्रिया ： 008618167069821
एजेन्ट को लागी हेर्नुहोस्
ग्रासरूट्स एडिसनको विचार
जब उनले Taizhou lainke अलार्म कं, लिमिटेड का महाप्रबन्धक Wang Liangren देखे, उनी एक "टिन हाउस" को छेउमा उभिएका थिए उनको हातमा एक पेचकस संग। तातो मौसमले उसलाई धेरै पसिना बगायो र उसको सेतो शर्ट भिजेको थियो। "यो के हो अनुमान गर्नुहोस्?" उसले उसको वरिपरि ठूलो मान्छे थप्पड हान्यो, एक ...
हामी काम मा फिर्ता छौं र सबै कुरा सामान्य मा फिर्ता छ, उत्पादन जारी छ।
21-03-02 मा व्यवस्थापक द्वारा
सबैलाई नमस्कार, हामी काम मा फिर्ता छौं र सबै कुरा सामान्य मा फिर्ता छ, उत्पादन जारी छ। चूंकि हामीले छुट्टी भन्दा पहिले कच्चा माल तैयार गरेका छौं, अब हामी सजीलै संग यस महिना भित्र 3000pc सम्म चलाउन सक्छौं। हामी stably र सजीलै अक्षीय प्रशंसकहरु, केन्द्रापसारक प्रशंसकहरु प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ अब जरूरत छ।
कम्प्रेसर, प्रशंसक र Blowers - आधारभूत समझ
21-01-13 मा व्यवस्थापक द्वारा
कम्प्रेसर, प्रशंसक र Blowers व्यापक रूप मा विभिन्न उद्योगहरु मा प्रयोग गरीन्छ। यी उपकरणहरु जटिल प्रक्रियाहरु को लागी काफी उपयुक्त छन् र केहि विशिष्ट अनुप्रयोगहरु को लागी अपरिहार्य बनेका छन्। उनीहरु लाई सरल शब्दहरुमा तल को रूप मा परिभाषित गरीएको छ: कम्प्रेसर: एक कम्प्रेसर एक मेसिन हो जो भोलु कम गर्दछ ...
प्रशंसक र Blowers बीच के फरक छ?
HVAC प्रणालीहरु स्पेस हीटिंग र वातानुकूलन को लागी वेंटिलेशन उपकरण मा भरोसा गर्दछन्, किनकि चिलर र बॉयलर आफैंले हीटिंग वा कूलिंग प्रभाव प्रदान गर्न सक्दैनन् जहाँ यो आवश्यक छ। थप रूपमा, भेन्टिलेशन प्रणाली भित्री ठाउँहरु को लागी ताजा हावा को एक लगातार आपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ। जनस्ख्याको आधारमा ...
मेरी क्रिसमस र नयाँ बर्ष २०२१ को शुभकामना!
२०२० को एक नजिक आउँदै संगै, हामी बाहिर पुग्न र हाम्रो शुभकामनाहरु पठाउन चाहन्थे। वर्षले सबैलाई धेरै फरक फरक तरीकाले प्रभावित गरेको छ। केहि तरिका मा हामी कल्पना गर्न शुरू गर्न सक्दैनौं। उतार चढाव को बावजूद, हामी आशा गर्दछौं कि २०२० तपाइँ र तपाइँको संगठन को लागी एक सफल बर्ष भएको छ। धन्यवाद...
Zhejiang सिंह राजा Ventilator कं, लिमिटेड एक अग्रणी डिजाइन र औद्योगिक र व्यावसायिक प्रशंसक वा समुद्री प्रशंसक को निर्माण मा शामिल उद्योग हो।
20-12-18 मा व्यवस्थापक द्वारा
Zhejiang सिंह राजा Ventilator कं, लिमिटेड एक अग्रणी डिजाइन र औद्योगिक र व्यावसायिक प्रशंसक वा समुद्री प्रशंसक को निर्माण मा शामिल उद्योग हो। हामी तपाइँलाई व्यापक केन्द्रापसारक प्रशंसकहरु र ब्लोर्स व्यापक उत्पादन लाइन को मिलान प्रदान गर्दछ। उत्पादनहरु को दायरा मा हामी indu छ ...
अप्रिल to देखि ११, २०१ from सम्म शंघाई न्यू इन्टरनेशनल एक्सपो सेन्टर मा ३० औं रेफ्रिजरेशन प्रदर्शनी मा भाग लिईयो।
19-04-17 मा व्यवस्थापक द्वारा
२०१ in मा ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रिजरेसन, वातानुकूलन, तताउने, भेन्टिलेसन र फूड फ्रोजन प्रोसेसि Ex प्रदर्शनी अप्रिल to देखि ११, २०१ from सम्म शंघाई न्यू इन्टरनेशनल एक्सपो सेन्टरमा आयोजना हुनेछ। इन्टरनेशनल को पदोन्नति ...
अप्रिल २०१ In मा, हाम्रो कम्पनी एक आगो ड्रिल आयोजित।
17-05-09 मा व्यवस्थापक द्वारा
अप्रिल १२, २०१ on मा ४ बजे, वायु रक्षा अलार्म बज्यो। कर्मचारीहरु क्रमशः आफ्नो जागिर छोडेर खुल्ला ठाउँहरुमा सारिएका छन्। यस पटक निकासी प्रक्रिया पछिल्लो समय को तुलना मा सुधार गरीएको छ, र आगो बाट बच्न को लागी सबै टाढा आगो क्षेत्र बाट लिईन्छ। तब Xiaodi चेन, ची ...
अप्रिल २०१ In मा, हाम्रो विदेशी व्यापार विभाग बाट सहकर्मीहरु वसन्त क्यान्टन मेला मा भाग लिया।
17-04-19 मा व्यवस्थापक द्वारा
क्यान्टन मेला एक वर्ष दुई पटक आयोजित हाम्रो कम्पनी को मनपर्ने प्रदर्शनीहरु मध्ये एक हो। एउटा हाम्रो कम्पनी द्वारा विकसित र उत्पादन गरीएको नयाँ उत्पादनहरु को प्रदर्शन गर्न को लागी हो, र अर्को क्यान्टन मेला मा पुराना ग्राहकहरु संग एक आमने-सामने छलफल गर्न को लागी हो। यो वसन्त क्यान्टन मेला sch को रूप मा आयोजित गरिनेछ ...
अप्रिल १२ देखि १४, २०१ from सम्म शंघाई न्यू इन्टरनेशनल एक्सपो सेन्टर मा रेफ्रिजरेशन प्रदर्शनी मा भाग लिईयो।
17-04-16 मा व्यवस्थापक द्वारा
रेफ्रिजरेशन, वातानुकूलन, तताउने, भेन्टिलेसन र खाना जमेको प्रशोधन मा २th औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी "अप्रिल १२ देखि १४, २०१ from सम्म शंघाई न्यू इन्टरनेशनल एक्स्पो सेन्टर मा आयोजित गरिनेछ। हाम्रो कम्पनी का महाप्रबन्धक र प्राविधिक विभागका सहकर्मीहरु र s ...
ठेगाना: नम्बर 688, Yangsi रोड, Zhang'an, Jiaojiang जिल्ला, Taizhou शहर, Zhejiang प्रान्त, चीन